I-china IP67 ikhethini ekhokele abavelisi bokukhanya kunye nabathengisi | Huayuemei
Umba Ikhethini le-LED elingenamanzi
I-LED yangaphakathi 4PCS
Amandla 3.6w / iiPC
Ukukhanya kwelayithi kwasemva (ikhethini ye-LED, iziliphu ze-bamboo); I-LATTICE ye-LED Matrix Lighting System sesona sisombululo sesikhanyiso esisebenza kakhulu nesisebenzayo kwiikhabhathi zezimpawu zangaphakathi nangaphandle kunye nokukhanya okukhulu kwendawo.
Uyilo loyilo lwenkqubo ye-LATTICE iza ngokulula ukufaka ii-rolls, ezivumela ukuba kubekhona lula ii-LED ezibekwe ngokugqibeleleyo kwimizuzu yokukhanya okukhanyayo okungafaniyo.
Esi sibane sasemva se-lattice se-LED sisebenzisa i-chip ephezulu ekhokelweyo eneelensi zangaphambili zivumela ubunzulu obuncinci, sikhuphe ukuKhanya okufanayo, ngaphandle kwamabala kubonwa kumphezulu womqondiso;
Ukukhanya kwe-LED kwiibhokisi ezikhanyayo Isebenzisa imodyuli yecala elinye elisecaleni lokukhanyisa iikhabhathi zemiqondiso, ibhodi yentengiso, ipaneli yokubonisa kunye neendidi ezininzi zezicelo zokukhanyisa ngasemva;
Iimodyuli ezibuyisiweyo zangasemva ngokukhanya okugqwesileyo ekusebenziseni amandla asezantsi, ilungele ukubuyela umva kweendonga okanye iibhokisi ezikhanyayo ebusweni.
Ukukhanya kwelayini ye-lattice kunye noyilo olutsha lwenkqubo ye-lattice iza ngokungasindi, ukuFakelwa koLondolozo lwaBasebenzi ngokulula;
Ukukhanya kwe-LED kwiibhokisi ezikhanyayo ezinenguqulelo entsha kunye ephuculweyo ye-lattice yoqobo, eneziphumo zokukhanya ezinokuthenjwa neziqikelelweyo, ukongeza ukuthembeka, ukuhlala ixesha elide, kunye netekhnoloji yangoku engapheliyo.
Izinto eziluncedo kunye neenkonzo
1. LuKhuselo lwe-Strip ye-LED engenamanzi. Ukulungela ibhokisi yokukhanya yangaphandle.
2.Adopt ngokupheleleyo ziphene sukube, grade manzi ukufikelela IP67.
3. Ukufuna izixhobo ezimbalwa kwaye akukho bungcali, ikhethini le-LED elingangeni manzi linokuxinzelelwa ngokulula kwaye lenziwe ngokobuhle nakowuphi ubungakanani
4. Ukukhanya okungafaniyo, ukuphepha iindawo ezinobushushu.
Singakwenza ngokwesicelo sakho sokwenza esona sisombululo sisiso.
IiNkonzo ze-OEM kunye ne-ODM.
7. Isiqinisekiso yiminyaka emi-3.
8. Sinika abathengi bethu izixhobo kunye neemveliso ezinobubele.
Isebenza ekuthengiseni ilaphu ibhokisi yokukhanya kunye nokwelula iiseli, ukhetho oluLungileyo lweeBhokisi zokuKhanya eziKhanyayo / iBhodi yokuKhanya kweBhodi yokuKhanyisa ... yenza isicelo sevenkile yetyathanga, ihotele, indawo yokuthenga, isitrato, isikhululo seenqwelomoya, isikhululo njl.njl. ,Iibhokisi zokuKhanya eziKhulu eziKhulu, Iibhodi zebhodi ezikhanyisiweyo zangaphakathi, Iindawo ezinkulu zokubonisa imiqondiso, Ibhodi yebhodi engabodwa kunye nePhindwe kabini, Iibhokisi ezinkulu zePowusta.
Egqithileyo I-RGB 3030 Curtain LED Strip
Okulandelayo: I-3030 lattice ekhokelwe umtya
Umtya okhanyayo we-lattice light
I-SMD3030 yeKhethini ye-LED Strip
Ileli ye-IP65 ikhokele ukukhanya komtya